KyiMayKaung: April 2016
Kamayut police says will take action against junta-sponsored anti Rohingya demonstration (fake) in front of US Embassy--
Important--state sponsored by junta demonstration in front of US Embassy, Rangoon, against US U.S. Embassy Rangoon​ 's use of word Rohingya--London Conference on the Destruction of Myanmar's Rohingya​
Kamayut police (hero of day) says will take legal action against "demonstrators" (Mistah Wirathu the racist monk sentastatement)
because permission was given only at another venue, not in front of the US Embassy--which is reasonable enough.
Mark my words, claws are coming out.
After it's rigged everything to its liking in years 2011-2016, junta is still not content and must do sabotage, using "democratic means."
This is clearlyajunta-sponsored "demonstration" of over 300 people including "monks."
Or racist monks--
Complete text in Burmese--
အမေရိကန်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြသူများကုို ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အရေးယူမည်
By ဇူးဇူး On April 28, 2016 @ 7:06 pm
ရန်ကုန်မြို့၊ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့တွင် အာဏာပုိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့သူများကို ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် နှင့်စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အရေး ယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကမာရွတ် ရဲစခန်းမှ ရဲမှူးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ သဲချောင်းအနီး စက်လှေနစ်မြုပ် သေဆုံးသွားသူများအတွက် မြန်မာနုိုင်ငံဆုိုင်ရာ အမေရိကန် သံရုံးက ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ ၀မ်းနည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရိုဟင်ဂျာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဟုသုံးစွဲ ခဲ့သော ကြောင့် အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၂၀၀ ခန့်က ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ အမေရိကန် သံရုံးရှေ့ တွင်ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အဆုိုပါ ဆန္ဒပြပွဲတွင် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (မဘသ) နှင့် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုတွင် ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်သော မကွေးကျောင်းတုိုက်မှ ဦးပါမောက္ခ၊ ဆရာတော် ဦးသုစိတ္တတို့က ဟောပြောခဲ့ပြီး အမျိုးသား လွှတ်တော် ကုိုယ်စား လှယ် ဟောင်း ဒေါ်ခင်ဝုိုင်းကြည်လည်း ဆန္ဒပြပွဲသို့ လာရောက်ခဲ့ကြောင်း ၊ မန္တလေး မှ မဘသ ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်သော ဦးဝီရသူကလည်း ယင်းဆန္ဒပြပွဲသုို့ သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲကြောင်း၊ ဆန္ဒပြသူ များ သည် အင်အား ၃၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပြီး နေ့လယ် ၁ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ မြန်မာ့ အမျိုးသား ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကလည်း ဟောပြောခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆန္ဒပြသူများက အမေရိကန်သံရုံးကုို ဆန္ဒပြရန် အာဏာပိုင်များထံသို့ လျှာက်ထားမှုကို ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သော်လည်း ဆန္ဒပြသည့် နေရာကို ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းတွင်သာခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကို လိုက်နာခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးဆောင်သူများတွင် သံဃာများ လည်း ပါဝင်သည့်အတွက် သံဃာ့စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲမှူး ဇော်ဝင်း က ဧရာဝတီသို့ အတည်ပြုပြောသည်။
“တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ပုဒ်မ ၁၉ နဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ ခွင့်မပြုတဲ့နေရာမှာလုပ်လို့ အရေးယူ တာပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ကိစ္စတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ဥပဒေမလိုက်နာလို့ အရေး ယူတာပါ” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
“ကျနော်တို့က ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းလုပ်တယ်။ သူတို့ဘက်က ဥပဒေစကားပြောလာရင် ကျနော်တို့ကလည်း ဥပဒေနဲ့အညီပြောမယ်” ဟု ဆန္ဒပြသူတဦးဖြစ်သော ကိုနောင်တော်လေးက ပြောသည်။
အမေရိကန်သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြရန်လျှောက်ထားမှုကို နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်မည်စိုးသဖြင့် ခွင့်မပြုဘဲ ဗိုလ်စိန်မှန် ကွင်းတွင်သာ ဆန္ဒပြရန် ကမာရွတ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကြောင်း သိရသည်။
Article printed from ဧရာဝတီ: http://burma.irrawaddy.com
URL to article: http://burma.irrawaddy.com/news/2016/04/28/112926.html
Posted by Kyi May at 10:30 AM No comments:
Posted by Kyi May at 10:39 PM No comments:
Posted by Kyi May at 12:59 AM No comments:
Quote from Dr U Thaw Kaung on role played by our father in UK in 1947-1950-- as sent by Bogyoke Aung San--
ဒီလိုဖြစ်တာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမှုကြောင့်လည်း ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခါနီး တစ်နှစ်လောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက လွတ်လပ်ရေးရပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားမယ့် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တွေ နေရာမှာ မြန်မာပညာရှင်တွေနဲ့ အစားထိုးရမယ် ဆိုတာ သိတယ်။ မြန်မာပညာတတ်တွေ မွေးထုတ်ဖို့ စီစဉ်တယ်။ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက မြန်မာပညာတော်သင်တွေကို အင်္ဂလန်ကို လွှတ်တယ်။ ဆရာ့အဖေ ဦးကောင်းက အဲဒီတုန်းက လက်ထောက် ပညာမင်းကြီးပါ။ အဖေ့ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးအရက တာဝန်ပေးတယ်။ အဖေ့ကို အကြီးတန်း ပညာရေး အရာရှိအဖြစ် အင်္ဂလန်မှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဦးပိုင်းမှစသွားနေရပြီး မြန်မာပညာတော်သင်တွေရဲ့ ကိစ္စအ၀၀ကို ဆောင်ရွက်ရတယ်။ ပညာတော်သင်တွေကလည်း ပညာသင်ပြီးရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ပြန်လာကြတယ်။ ဆရာ့အဖေ ဒီတာဝန်ယူရတဲ့ အချိန်တုန်းက အင်္ဂလန်မှာ မြန်မာသံရုံးတောင် မရှိသေးလို့ သံရုံးဖွင့်ဖို့တာဝန်လည်း အဖေက ယူရတယ်။ ငွေစက္ကူထုတ်တဲ့တာဝန်လည်း ပေးလို့ မောင်ကောင်း ဆိုပြီး ပထမဆုံး ငွေစက္ကူတွေမှာ အာမခံအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးရပါတယ်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်ကုန်မှ ပြန်လာရတယ်။
Credit ~ Inspire Myanmar
1Mi Aye Seint Win
Posted by Kyi May at 10:36 PM No comments:
The teak trees have become lamboghinis--poem by KMKaung
The teak trees have become lamborghinos
the friends of Burma have become friends of em
the businessmen have become cronies
drug money has been washed
the country has been prostituted
the broadcasters continue
their bump and grind routine
freedom has flown out ofahole in the wall
accompanied by so-called democracy
in the nominally civilian government
real civilian government
lame duck with wings clipped.
Poor duck waiting to be steamed pekinged
in the triple boiler
baked underground process
wrapped in banana and coconut
the people are still rejoicing
Daw Suu will die endlessly campaigning
and proving herself.
Bright Sun only threatens once
when the army shoots
it shoots to kill.
In 2007, Kenji Nagaii's hands held his camera upafew seconds
then he fell on his side and died
The soldier poked at him withastick? Like checkingadead dog.
The soldier has never been court martialed.
Japan hardly kicked upafuss.
In 1988, Ko Phone Maw was shot
Win Maw Oo and many others were shot
in 1962 many were shot
at the port many were shot.
As recently as2years ago
Ko Par Gyi was shot
Don't cry Ma Nandar--
Diamond Diamond is wearing
a yellow robe
resides in the barrel ofagun
resides inabig government
withabig army
and no internal enemies or external
The weather vanes dither around
and spin widely.
The earth shook wildly
Burma Japan Ecuador.
The shake got harder.
only in the stories.
6.9 Richter scale earthquake neare Mawlaik, Burma -- US Geological Survery Report--
Lame duck new Burmese admin--poor duck trying to fly--
It is uncertain how much power "the new administration" is being given by the junta.
Therefore it should avoid making ambitious statements such as it will resolve the Rangoon traffic problem. See below. The US based radio station should stop enticing them to do so.
The junta is still firmly in control and is likely to throw inawild card anytime.
It is their game, it is their army.
The less promises made on the part of the civilian/NLD appointees the better.
The next thing you know, the junta will create an incident or incidents and say it had to step in or else there will be anarchy.
They love this word "anarchy" as much as they hate the words democracy and federalism and human rights.
See what happens during Thingyan.
The interviewee below said that they banned the commercial pavilions as they were being used to sell drugs.
The hard drugs business may go underground.
Who knows how much formadelhyde!!! is already in the lahpet or pickled tea.
New admin, in Burma--so-called, says it will resolve Rangoon traffic problem--
Posted by Kyi May at 4:17 PM No comments:
K M Kaung--Home is Where? Housewarming and My Potsdam
Posted by Kyi May at 10:14 PM No comments:
Burmese political prisoners released at initiative of Daw Aung San Suu Kyi--
Shakespeare's First Folio discovered inaScottish stately home--
Shakespeare's First Folio,3books 36 plays only portrait, worth6m USD, Printed in 17th century.
Kyi May Kaung's poem Eskimo Paradise, in Norton's Language foraNew Century--
A top 1000 reviewer on Amazon liked my poem Eskimo Paradise--
By Dr. Joseph S. Maresca HALL OF FAMETOP 1000 REVIEWER on July 25, 2008
By matt horton on August 19, 2008
Pyu and earliest Pali gold manuscripts from Khin Ba Mound--in Burma--copied and pasted from Facebook.
Kyi May Kaung shared Win Kyaing's post.
Win Kyaing added4new photos.
April3at 1:34am ·
တန်ဘိုးကြီးသောပါဠိပိဋကတ်တော် ရွှေပေချပ်များကို မင်းစိုးရာဇာတို့၏ ကြီးကြပ်မှူဖြင့်ဖန်တီးပြု လုပ်၍ ဓမ္မရတနာအဖြစ်ဋ္ဌာပနာတိုက်၏ အလယ် တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အမှားအယွင်းရှိပါက အစားထိုးပြုပြင်ရန်မလွယ် ကူပေ။ ဋ္ဌာပနာ အလယ်တည့်တည့်တွင် နေရာယူထည့်သွင်းထားသည်မှာ အရောင်တင်ထားသည့် ငွေဗောဓိပလ္လင်ကြုပ်ကြီးဖြစ်သည်။ ငွေကြုပ်အဖုံး နှုတ်ခမ်းတလျောက်တွင် ပျူဘာသာ တစိတ်တပိုင်းနှင့် ပါဠိဘာသာ အများစု ပါသော စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပါသည်။ ငွေကြုပ်၏ကိုယ်ထည်ပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်(၄)ဆူကို ဖောင်းကြွပုံထုလုပ်ပူဇော်ထားပြီး တစ်ဆူစီကွင် ပါဠိတော်ကောက်နှုတ်ချက်စကားစုများပါရှိသည်။ ခြွင်းချက်အနေဖြင့်
ဗုဒ္ဒဥာဏ်တော်(၁၄)ပါးအနက်မှ (၂)ပါးကို ဆက်လက်ရေးထိုး ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှေးကျသောပါဠိတော်မူများအနက် ဤပါဠိတော် ကောက်နုတ်ချက် (၂)ခုမှာ လွန်စွာရှားပါးပြီး တစ်ခုမှ ချို့ယွင်းလိုအပ်ချက်ကို အခြားတစ်ခု တွင်ဖြည့်စွက် ၍ ပြည့်စုံအောင် ရေး သားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဌာပနာတိုက်၏ ကြွယ်ဝများပြားသော လှူဒါန်းမှုပစ္စည်းများစွာတွင် အတူတကွတွေ့ရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ငွေကြုပ် အဖုံး တွင် ရေးသားထားသည့် အရေးအသားများ အရ စာရေးသားသူ ဆရာတော်သည် ပျူဘာသာနှင့် ပါဠိဘာသာနှစ်မျိုးစလုံးကို ရင်းနှီးကျွမ်း ၀င်ကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိသည်။
ရွှေပေချပ်တို့၏ အရွယ်အစားမှာ (၁၆.၅ x၃.၁) စင်တီမီတာ ရှိသည်။ ရွှေပေချပ်(၁၈)ချပ်တွင် စာကြောင်းရေ (၃) ကြောင်း၊ (၁)ချပ်တွင် (၄)ကြောင်းနှင့် အခြား (၁) ချပ်တွင် (၂) ကြောင်းနှင့် စုစုပေါင်း စာကြောင်းရေ (၆၀) ကြောင်းရှိသည်။
ကောက်နှုတ်ချက်အများစုသည် ၀ိနယပိဋက ပါဠိတော်မှဖြစ်သည်။ ၀ိသုဒ္ဒိမဂ္ဂနှင့် အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဃဟ ကျမ်းများ မပေါ်ပေါက်မှီအချိန် အေဒီ(၂) ရာစုခန့်ကမူရင်းပါဠိတော်မှမူပွားများဖြစ်ပြီး ရှေးကျသည့်မူများဖြစ်သည်။
ဤပျူ ရွှေပေချပ်များကို ဦးလူဖေ၀င်း(၁၉၄၀)၊ ဦးသာမြတ်(၁၉၆၃)၊ ဒေါ်သန်းဆွေ(၁၉၉၂) တို့မှလေ့လာဖတ်ရှူ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ကြ သည်။ အလားတူ နိုင်ငံတကာ ပါဠိပညာရှင်များမှလည်း လေ့လာမှုများရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ် တွင် Oskar von Hinuber(Univ. of Freiburg), Harry Falk(Univ. of Berlin), Richard Gombrich (Univ. of Oxford) နှင့် Janice Stargardt (Univ. of Cambridge) စသည့် ပညာရှင်များပါဝင်သည့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ ဤပါဠိတော်ရွှေပေချပ်များ သည် အေဒီ (၅)ရာစု အစောပိုင်း သို့မဟုတ် အလယ်ပိုင်းလက်ရာ များအဖြစ် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ယခင်ကရှေးအကျဆုံး အထောက် အထားအဖြစ်ယူဆခဲ့သော နိပေါနိုင်ငံ ခတ္တမန္ဒူ အမျိုးသားပြတိုက်မှ အေဒီ (၈)ရာစု (၉)ရာစု လက်ရာ ပေချပ်များ ထက် သက်တမ်း စောနေသည်ဖြစ်၍ သရေခေတ္တရာ ခင်ဘကုန်း ရွှေပေချပ် များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျန်ရှိနေသော ပါဠိတော် မူများအနက် ရှေး အကျဆုံးသော အထောက်အထားများဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပေသည်။
Daw Suu chastizing VOA correspondent who cannot speak Burmese well--copied and pasted from Facebook
Kyi May Kaung shared Aung Kyaw's post.
Aung Kyaw with Sunday Aries.
မြန်မာဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာအနေကြာလို့ မြန်မာစကားမပြောတဲ့ VOA သတင်းထောက်ကို ဆူလေတဲ့ အမေစု ..
VOA သတင်းထောက်ကို အပြစ်မြင်စေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ အမေ့ရဲ့မှတ်သားစရာစကားကို လိုက်နာကြစေချင်လို့ပါ။ မကြေးမုံကိုတော့ အနူးအညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်။
Kyi May Kaung yoke lay hla loathet lay gne lo, tha tin htauk khant htar te bwee oh aye ko ma soo boo larr?
Kyi May Kaung oh nin khwet nin nair, bar maye nay hman taun ma hman hnaing buu.
Kyi May Kaung sauk shet kwair tar be. ba lo dee char taik ko democracy khaung zaung ko maye khaing tar lair? ma htee me myin yar kya lun te.
Posted by Kyi May at 11:04 PM No comments:
Kyi May Kaung's review of Love and Death in Bali by Vicky Baum--
My review of Love and Death in Bali--